जितु भाई ! तपाईं कता हुनुहुन्छ ? ज्ञानमणि भुर्तेल
२० असार २०७८, आईतवार २१:४२
जितु गौतम ! अचेल त दर्जी पनि लेख्न थाल्नु भएको छ क्यारे ! हैन त ?
०५२/५३ तिरको तपाईं सगै जोडिएको एउटा रोचक प्रसंग स्मरणम गराउँछु है त ! तपाईं लाई सम्झना होला नहोला कुनै दिन बिहानै तपाईंको अगुवाइमा गुहेश्वरी मन्दिर परिसरमा मन्चन भैरहेको कार्यक्रममा मलाई देख्नासाथ – ‘ ओहो ! मेरो पुरानो पत्रकार मित्र ‘ भन्दै सवैसग परिचय गराउदै भेलाको उदेश्य प्रष्ट्याउने क्रममा मन्दिर प्रवेश र पुजाआजा पश्चातको सहभोजमा मलाई समेत सहभागिताको लागि आग्रह गर्दाको समयको सम्बाद जस्ताको तस्तै राख्दैछु !
– जितु जि ! तपाईंलाई यस अघि मन्दिर पसेर पुजा गर्दा कसैले जात सोधेर रोकेको थियो ?
– त्यस्तो त थिएन ! कसैले रोकेको छैन !
– तपाईंहरु भोलिका दिनमा पनि यसैगरी दैनिक पुजारी र भिडियो क्यामेरा बोकेर पुजा गर्न आउनुहुन्छ त ?
– खै ! भुर्तेल सर ! त्यो त भन्न सकिएन ! के हुन्छ ? थाहा छैन !
– मैले तपाईंको क्यामेरा धारक तिर देखाउदै बोलेको थिएँ
– तपाईंलाई यस अघि कसैले रोकेको पनि थिएन र भोलि फर्केर आउने ग्यारेन्टी पनि छैन भने यो नाटक किन त ? जहाँ सम्म सहभोजको कुरो छ – तपाईंले पत्रीका बेच्ने बिर्तामोडको छिडिमा तपाईं सगै टास्सिएर दर्जनौंपटक चिया खाएकैछु त भन्दा छेउको मुन्द्रेले पाखुरा सुर्किदा तपाईंले रोक्नुभएको थियोे !
– पुजा सकियो ! भिडियो खिचियो !! भोलिपल्टको पत्रीकामा ‘ दलित द्वारा मन्दिर प्रवेश र पुजाआजा पश्चात् सहभोज ‘ शिर्षकमा समाचार पनि छापियो होला !! भोजमा सहभागी हुँदा म आफैं गएर चिया समोसा लिन खोज्दा मलाई एउटा कुर्सीमा बसाएर केहिबेर अघि पाखुरा सुर्किनेले चिया समोसा बोकेर आएर मलाई दिदै हल्का मुस्कान छोड्यो ! उसको मुस्कानले प्रष्ट भन्दै थियोे
– देखिस बाहुन काठा ! मैले तेरो चिया समोसा छोईदिएर तेरो जात खुईल्याईदिएँ ! तपाईंले पनि ‘ भुर्तेल सर ! यो तातो समोसा मेरो तर्फबाट ‘ भन्दै एउटा समोसा थमाईदिनु भो ! तपाईका केटाहरु बाहुन क्षेत्री खोजीखोजी चिया बाँडन ब्यस्त थिए ! बिचबिचमा तातो समोसा बाँड्ने तपाईं हुँदैहुनुहुन्थ्यो ! त्यो सहभोज नामको चर्तीकला देखेर म मात्र हैन गुहेश्वरी क्षेत्रका बाँदर समेत चकित थिए !
बाहुनको चिया समोसा छोईदिएर ‘ जात खुईल्याउने ‘ दम्भी समुहको दलित मानसिकता देखेर २९/३० साल तिर चन्द्रगढी घरमा भोजपुर गोगनेको गम्बे दमाईलाई आदरपुर्वक ‘ गम्बे दाजु ‘ भन्दै आफ्नो भान्सामा पिर्कामा बसाएर भात खुवाउने मेरि आमाको सम्झना भो ! तिसकै दसकमा एउटा दमाईलाई दाजुको दर्जा दिएर भात खुवाउदा गोगनेको भोलानाथ पाद्धे ( जिवनाथ न्यौपाने ) कि छोरी तथा दिङलाको पुर्ण प्रसाद भुर्तेलकी बुहारीको जात खुईलेन भने अहिले तिनै आमाको छोरालाई चिया समोसा छोईदिएर जात खुईल्याएको आत्मरतिमा रमाएको दम्भी समुहको ताल देखेर आफ्नो हाँसो रोक्न मुस्किल भएको थियोे ! थपिथपी चिया समोसा खाईदिएँ ! मेरो जनै पनि मक्काएन ! जात पनि गएन ! अहिलेसम्म बाहुन नै छु !!
तपाईहरु फेरि फर्केर गुहेश्वरी जानू भयो कि भएन ? दैनिक पुजाआजा भयो कि भएन ? जानकारी भएन ! खोजिनिती पनि गरिएन ! दलित मुक्ति नामको आन्दोलनको चर्चा चै बेलाबेला सुनिन्थ्यो ! बिचमा तपाईंलाई मुलुकले राज्यमन्त्री पनि बनायो क्यारे ! त्यस समय कति दलितलाई मुक्ति दिलाउनु भो ? दलितलाई फलित बनाउने तपाईंको आन्दोलन कता पुग्यो ? कुन रूपमा छ ? त्यसको हिसाब किताब त तपाईं सगै होला !
जितु भाई !
एक दिनले मात्र भएपनी तपाईं मेरो भाई भएकोले यति कुरो भन्छु कि – तपाईं र तपाईं जस्ता ‘ साच्चै दलित
मुक्त गर्न हिंडेका बुद्धिजिवि ‘ जुर्मुराउनु जरुरी भैसकेको छ अब ! त्यसका लागि दलित आयोग बाट प्राप्त दलित प्रमाणपत्र छातीमा झुन्ड्याएर बाहुनले हेपे भन्दै बाहुनको खानेकुरा छाम्दै ‘ छोईदिएको ‘ आत्मरतिमा रमाउने दम्भी समुहलाई जातिय पसल बन्द गरेर टुडिखेलमा भेला गर्नुस ! सहभोजको आयोजना गर्नुस ! दलित आयोग बाट प्रमाणीत बिश्वकर्मा , परियार , मिजार को को छन ? सबै भेला हुनुस ! अन्कमाल गर्नुस ! सगै बसेर एक अर्काले छोएको भात खानुस !
एकले अर्कोलाई आफ्नो भान्सामा पसाउने प्रण गर्नुस ! अझ सकिन्छ भने ती अन्यायमा परेकी के जाती सुनार अबिवाहित छन भने उनलाई चुनौती दिने त्यो सार्की केटा सग लगनगाँठो कसिदिनुस ! तपाईं आफैंले पनि कुनै सार्किकी छोरिलाई बुहारी बनाउने जमर्को गर्नुस ! सार्की केटालाई ज्वाईं बनाउने तिर लाग्नुस ! धेरै बाहुनले त कामी दमाईलाई ज्वाईं पनि बनाएका छन ! बुहारी बनाएर भित्र्याएका पनि छन ! तपाईंहरु भित्रै अन्तरजातीय बिबाहको सुरुआत गर्नुस ! अझ तपाईंको ईच्छापुर्ती हुन्छ भने उपाध्याय नै लेख्न थाल्नुस ! गौतम त लेखेकै हो क्यारे ! अहिले दर्जी किन थप्नु भो ? तपाईंलाई नै थाहा होला !
बाहुन लेख्दैमा कोहि फलित हुने र कामी दमाई सार्की लेख्दैमा कोहि दलित हुँदैन ! दलितले बाहुनको खानेकुरा छामेर ‘ छोईदिएको ‘ घमण्ड गर्ने र बाहुनले ‘ भुइँमा बसाएर ‘ छुन नदिएको ‘ आत्मरतिमा रमाउने दम्भी मानसिकता चै दलित हो ! अब त्यो सोच बदल्नु पर्छ ! त्यो दलित मानसिकता भित्र रहेको बिकृत पिलो भित्रको आखो निकालेर फाल्नुपर्छ
भनिन्छ – अरुलाई बदल्ने हो भने सुरुआत आफैं बाट गर्नुपर्छ ! सक्नुहुन्छ भने तपाईंलाई दलितको प्रमाणपत्र भिराएर दलित बनाउने दलित आयोग नामक सरकारी धमिराको ढिस्को भत्काउने साहस गर्नुस ! तपाईं अघि लाग्नुस म बाहुन पछि लागौंला !!
यति गर्नु भो भने टुडिखेलको तपाईंको सहभोजमा वरिपरि बसेर तपाईंको जयजयकार गर्दै ताली बजाउने मात्र हैन ! तपाईंले थपिदिएको तातो समोसा खाएर सक्रिय सहभागिता जनाउने छु ! तपाईं चिया समोसा थप्दै गर्नुहोला म थपिथपी खाईदिउँला !!तपाईं कता हुनुहुन्छ ? कहिले भेट होला ? सहभोजको व्यग्र प्रतीक्षामा छु ! खवर पाउँ !!!!!